शरद ऋतु बारेमा पहेलियों। बच्चाहरु को लागि शरद ऋतु बारेमा छोटो पहेलियों
घर र परिवार, बच्चाहरु
पहेलियों लोकगीत को विरासत हो। पुरातन समयका देखि तिनीहरूले कौशल र संसारको समझ को परीक्षण रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कला यस प्रकारको हाम्रो दिन पुग्यो र बाँच्न जारी छ।
पहेली को घटना को इतिहास
मानिसहरूले हामीलाई वरिपरिको विश्व बुझ्न गर्दा र गर्छन् यसको manifestations डराउने पहेलियों पुरातन समयका, उत्पत्ति।
तिनीहरूले ग्रीस र रोम, आफ्नो अनुमान यात्री Sphinx, र आफ्नो धूर्त रूस पुरातन मिथक Mermaids संग गाँसिएको मा भनिएको हो। वास्तवमा, मन, बुद्धि र अवलोकन मानिसहरूलाई मा को विकास मा लोक कला यस प्रकारको योगदान - overestimate छैन।
पतन लागि प्रेम
प्राचीन समयमा मानिसहरूले प्रत्येक सिजन मूल्यवान, तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई दिन कि उपहार द्वारा विभाजित थिए। शरद ऋतु - भविष्यको लागि फसल र समृद्धिको। आफ्नो उद्यान र फल बगीचहरुमा तरकारी संकलन यस समयमा, वसन्त लागि जमीन तयार र चिसो लागि पर्खेको:
पहेंलो झर्ने पात संग चिसो - गर्मी पछि।
हावा पातहरु छरिन्छ, र हामी बस खुसी हुनुहुन्छ।
हँसिलो गर्ने, Mischievous हामीलाई अतिथि मा दस्तक,
पाकेको जामुन र पागल को एक मुट्ठी हामीलाई दिन्छ?
प्रकृति को पहेली
प्रकृति मा परिवर्तन देख्नु र accustomed बच्चाहरु को लागि शरद ऋतु बारेमा पहेलियों यो मान्छे दिन्छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न। शरद ऋतु - यो एउटा विशेष समय छ। उनको सौन्दर्य र singularity छैन केवल साधारण मान्छे को ध्यान आकर्षित, तर ठूलो कवि, लेखक, कलाकार र संगीतकार पनि।
"यो रंग बिना र ब्रश बिना छ र सबै पात repainted" - शरद ऋतु अनुमान पहेलियों बारेमा त।
"सुन्तला, सूर्य चम्कने रातो, पुतली जस्तै आफ्नो पात, circling र hovering" - यसरी शरद ऋतु बुद्धिमानी पुर्खाहरूको मा रूखहरू प्रतिनिधित्व गर्छ।
एक केही फरक फारममा स्थायी, सबै कुरा परिवर्तन र चाल हो भनेर साइन रूपमा मानिसहरूले स्वीकार wilting फूल बाट संक्रमण - "को पात Aspen देखि गिरने छन्, आकाश मा तीव्र वेज rushes।"
"सबै आँखा Zavoloka (कुहिरो) को फाटक मा खैरो-haired हजुरबुबा"; शरद विशेष गरी वातावरण परिवर्तन, बिरुवाहरु र मौसम को manifestations मा धनी छ "माखाहरु, एक छैन चरा, एक जनावर (हावा) howls, र।" यस्तो Malasha पहेलियों भेटी, पुरानो बच्चाको कल्पना विकास गर्न मद्दत गर्छ।
प्रकृति - लोक कला मनपर्ने विषय। मान्छे अत्यधिक यसको "उदारता" मा निर्भर छन्। पहेलियों, शरद ऋतु बारेमा कविता विशेष विविध छ। सबै भन्दा ठूलो क्रप शरद ऋतु मा फसल कटनीको समय छ। उहाँलाई प्रयास संख्या अनुसार, तिनीहरूले अर्को बाली र वसन्त को सम्म बाँच्न सक्षम हुनेछ:
टोकरी मा बाली मजा
आत्म-leveling, सुनको स्याउ र Melons।
उदाहरणका लागि, हामी यस सुनको pore सबै धन्यवाद।
तपाईं शायद जो ढोकामा दस्तक छ Guessing?
प्रकृति को whims मा मानिसहरूको निर्भरता, विभिन्न घटनाहरूको घटना समझ को कमी हामीलाई पहेली को एक विशाल नम्बर दिए, र उपदेश लिन।
बच्चाहरु को लागि पहेली
मानिसहरू सधैं तिनीहरूले समुदाय भविष्य जग हुनेछ भनेर थाह पाउँदा, सन्तानको हेरचाह। तिनीहरूलाई लागि युवा वृद्ध, हेरविचार फीड र आफ्नो अन्तिम यात्रामा escorted। कठिन समयमा तिनीहरूलाई मदत बच्चाहरु बुद्धि र अवलोकन को शक्तिहरु विकास गर्न, वा शुभकामना ल्याउन - यो वृद्ध को कर्तव्य थियो।
मा पुरानो दिन, समुदायको प्रत्येक सदस्यले लाभ उठाउन गर्नुपर्छ। पुरानो र बुद्धिमानी मान्छे युवा को शिक्षा सुम्पनुभयो। दृष्टान्तों, पहेलियों, संकेत, दन्तिये - सबै छोराछोरीलाई संसार र यसको घटना सिक्न सुनिश्चित गर्न सिर्जना गरियो।
विशेष छोराछोरीको बुद्धि विकास गर्न बहुमूल्य योगदान पहेली बनेको छ। तिनीहरूले विचार र पालन गर्न छोराछोरीलाई सिकाउनुभयो:
जो मुटुको धड्कनहरू को छत, तर नल सबै रात,
र murmurs र lulls गाउँछन्?
को वर्णन विषय को विशेषताहरु Enumerating, रहस्य बच्चा मा सोच को associative प्रकार विकसित।
उदाहरणका लागि, मौसम र आफ्नो manifestations बारेमा प्रश्नहरू - "परी कस्तो आयो, सुन वन (शरद ऋतु) मा तैयार?"; ", ठूलो आंशिक र अक्सर भिजेको सारा पृथ्वी (वर्षा)।"
शरद ऋतु, वसन्त, प्रकृति बारे पहेलियों लोकप्रिय थिए। मानिसहरू प्यार सुनको उमेर भनिन्छ गिरावट, बाली काट्ने लागि धन्यवाद र अर्को वर्ष सम्म पछ्याए।
बिस्तारै, पहेली को भाग भएका छन् छोराछोरीको लोकगीत, हाम्रो समयमा विकसित जो।
"जीवन" आज रहस्यहरुलाई
आज छोराछोरी पनि उत्सुक, साथै सबै समय मा आफ्नो साथीहरूको छन्। रहस्यहरुलाई को आकर्षक शक्ति तिनीहरूले एउटा चुनौती र बुद्धि को परीक्षण छन्। बच्चाहरु सधैं यो चुनौती स्वीकार गर्न खुसी छन्। आजकल, कविता, प्रश्नबारे गर्न, र छोराछोरीलाई तिनीहरूलाई वरिपरि संसारको अवलोकन र प्रेम विकास गर्न मद्दत:
को आगंतुकों मा शरद ऋतु हामीलाई आए र तिनीहरूलाई ल्याए
के? अनियमित मलाई भन्नुहोस्, तर पाठ्यक्रम (defoliation)
"यो तरल हामी आवश्यकता हो, H2O वा ..." (पानी) - आज, हरेक दिन नयाँ नयाँ शब्द, वस्तुहरु, वयस्क पहेलियों को रूप मा एक चंचल तरिकामा छोराछोरीलाई सिकाउन कि घटना हो।
स्कूल वा किंडरगार्टन मा एक पाठ गर्न सजिलो तरिका रोचक र रमाइलो - छोराछोरी आफ्नो विषय मा पहेली दिन छ।
स्कूलमा अध्ययन रहस्यहरुलाई
अन्य लोकगीत एउटा बराबरीको मा जूनियर उच्च स्कूलमा लोक कला अध्ययन यस प्रकारको। पुरातन समयका रूपमा, बच्चाहरु जस्तै चाल प्रश्न र "शक्ति" तिनीहरूलाई संसारमा जवाफ खोज्न। pupils, वर्ष को अन्य समय र महिनाको नाम लागि शरद ऋतु बारेमा पहेली चाँडै सोच्न मद्दत गर्छ:
निम्न अगस्ट झर्ने पात नृत्य आउँछ,
र यो बाली मा धनी छ, हामी पक्कै पनि थाहा (सेप्टेम्बर)।
यस्तो बच्चाहरु ज्ञान लागि आफ्नो जिज्ञासा र इच्छा विकास सम्झिन सूचनात्मक र चंचल तरिका पाठ।
पहेली बस उच्च विद्यालय विद्यार्थी शिक्षण को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले, एक चाल प्रश्न अक्सर विद्यार्थीहरूले ज्ञान परीक्षण गर्न शिक्षकहरू पकड जो क्विज, समावेश छन्।
धेरै जस्तै रूपमा छोराछोरीको घटनाहरू को ज्ञान दिन को दिन बाली, रंग, पप तारा मात्र होइन छोराछोरीलाई रम्न तर पनि तिनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान र कौशल देखाउन मौका लक्ष्य छ। सजिलो बस पहेली zagadyvaya गर्नुहोस्।
समयमा खेति तिहार सामान्यतया शिक्षकहरू उत्तर, बच्चाहरु कविता को अन्त मा एक शब्द प्राप्त गर्न आवश्यक जब संग शरद ऋतु बारेमा पहेलियों प्रयोग:
हावा पात भ्रूभंग पहनता छ, यसलाई भयो (गिरावट)।
काठ नंगा, नीला आकाश, वर्ष (शरद ऋतु) को यो समय।
फल र तरकारी को नाम सिक्ने एक खेल को रूप मा स्थान लिन्छ जब बच्चाहरु सम्झना गर्न सजिलो। यी पहेली बच्चाहरु को ध्यान र राइम एक अर्थमा विकास:
उहाँले जो कोहीले अपमान गर्न, बगैंचामा बढ्छ।
खैर, म किनभने सफा (bow), चारैतिर रुन।
जसमा लागि बच्चाहरु को पहेली प्रयोग तपाईं स्वतन्त्र विचार र स्मार्ट हुनु आवश्यक छ। अक्सर, यी यस्ता कुहिरो, वर्षा, चिसो, र धेरै अन्य रूपमा, गिरावट मा प्राकृतिक घटना बारेमा प्रश्नहरू छन्, "सेतो फूल साँझ र बिहान फेड (तारा) मा ब्लूम"।
यसरी छोराछोरीलाई अवलोकन र बुद्धि जाँच गरियो।
आफ्नो साथीहरूको अगाडि आफ्नो मन व्यक्त गर्न मौका कौशल लागि, तपाईं एक उपहार प्राप्त गर्न सक्छन्, विशेष गरी यदि बच्चाहरु को लागि रोचक यी रोमाञ्चक बिदा बनाउँछ।
हाम्रो समय मा, पहेली उज्ज्वल र सुन्दर पुस्तकहरू जारी गर्न जारी। तिनीहरूले आमाबाबुले छोराछोरीको विकासका लागि खरिद सिफारिस पूर्वप्राथमिक उमेर ध्यान, अवलोकन र जिज्ञासा। , बच्चा पहेली संग विश्लेषण सिक्न र जनावर र बिरुवाहरु, रंग, र शरद ऋतु बारेमा छोटो पहेलियों र वर्ष को अन्य पटक नाम सम्झना गर्न सक्छन्, मौसम र आफ्नो manifestations संग बच्चा परिचय: "। आशुक्रोधी नहीं, ब्रश precincts मा हल्का नीलो (hoarfrost) के"
आजको विद्यालयमा छोराछोरीलाई आफ्नो मान्छे को enigmas संग, तर पनि अन्य nationalities को लोकगीत संग मात्र होइन, अब शुरू छन्। यो रचनात्मकता र मदत बच्चाहरु को यस प्रकारको फारम अन्य देशहरूमा मान्छे को दुनिया सम्बन्धित को भूगोल विस्तार।
यो साहित्यिक विधा शिक्षा र एक प्रारम्भिक उमेर देखि बुद्धि विकास छ रूपमा, कहिल्यै भूल हुनेछ।
बच्चाहरु को लागि भाषा विकासको लागि Chistogovorki। ठीक कुरा सिक्न
निपल "Avent" - छातीबाट सबै भन्दा राम्रो सहज
कसरी बाट बच्चा घर एक बच्चा अपनाउनु: आवश्यक कागजात
लगनशील भई लागिरहेमा को विकास, राम्रो मोटर कौशल र कल्पना: बच्चाहरु किंडरगार्टन लागि शिल्प गिरावट
किन बाघ स्ट्रिप? छोराछोरीको प्रश्नहरू
को प्रिपेरेटरी समूहमा बच्चाहरु संग व्यक्तिगत काम: सामान्य जानकारी
माउसुलीबाट - माउसुलीबाट छेपारो छ ...: नर्सिङ, खुवाउने, आवास
स्ट्रबेरी संग सुगन्धित र स्वादिष्ट cheesecake
कसरी "Mozile" मा कथा हेर्न र यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ कि
होन्डा: लामबद्ध। मोटरसाइकल हरेक स्वाद को लागि "होन्डा"
ब्रान्ड जूता Wrangler - सान्त्वना र सुविधाको लागि डिजाइन जूता
किया Cerato। समीक्षा
Alexandrite (पत्थर): गुण र जादुई निको मणि
ताररहित कल - आपूर्ति र संकेत प्राप्त एक कुशल सिस्टम
को डायपर आफ्नो पिल्ला कसरी सिकाउन - यो हरेक कुकुर मालिक जान्नुपर्छ छ
एनालग "Omacor," कार्य को आफ्नो सिद्धान्त र प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
Waterpark "Atoll" (Kstovo) - Nizhny Novgorod क्षेत्रमा पहिलो पानी मनोरञ्जन केन्द्र
नागरिक प्रक्रियामा प्रक्रियागत समय सीमा: अवधारणा र प्रकार